ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:Questions - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၅ ပို႔စ္တင္ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုတင္ရမလ။
၁၆ စာနယ်ဇင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း
၁၉ Facebook မှာblue mark ရချင်တယ်ဆရာ
၂၀ Burmese Ghouls သတင်းဆောင်းပါး ရေးချင်လို့ပါ ဆရာများ Wiki မှာ ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးပါဦးဗျ။
ပုံတင်နည်းလမ်းညွှန်မှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Ninja⛧Strikers «☎» ၀၅:၁၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၅ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အင်တာနက်မှာသေသေချာချာရှာဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့မှာဆိုပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းမတတ်တော့ တချို့ရေးထားတာတွေ နားမလည်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Yin May Lwin (talk) ၁၅:၃၁၊ ၃၁ မေ ၂၀၁၅ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wiki Map ဆိုပြီးတော့ သီးသန့်မရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးအတွင်းက Infobox မှာ နဂိုရှိပြီးသား မြေပုံပေါ်မှာ တည်နေရာကို coordinates အသုံးပြုပြီး ပြသပေးတာပဲရှိပါတယ်။ အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်က လောလောဆယ် မြန်မာဝီကီမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိသေးပါဘူး။ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီဖက်က Template:Location map, Template:Coord စာမျက်နှာတွေမှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၃၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ရှိနှင့်ပြီးသော ခေါင်းစဉ်ကို အသစ်ဖန်တီးလို့တော့ မရပါဘူး။ အကြောင်းအရာတူပြီး ခေါင်းစဉ်ကွဲလွဲနေတာမျိုးကျတော့ ပိုမိုသင့်လျော်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆီကို redirect လုပ်ပါတယ်။ မေးခွန်း သိပ်မရှင်းဘူးဗျ။ ခေါင်းစဉ်အမည်ပြောင်းဖို့ဆိုရင် ခေါင်းစဉ်အပေါ် အလယ်လောက်က ရွှေ့ရန် ကိုနှိပ်ပြီး အမည်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၃၈၊ ၂ မေ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Johncornersky (ဆွေးနွေး) ၁၇:၀၇၊ ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဆောင်းပါးလိုက် ကူးယူတင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဝီကီဆောင်းပါးထဲမှာ အကိုးအကားအချက်အလက် ထည့်သွင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲ ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၁၁၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဲဒါက mediawiki ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရဲ့ bug ဖြစ်တာကြောင့် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ တောင်းဆိုထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်းခံပေးပါဦး။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၄၆၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Broတို့​ရေ ကမ္ဘာ​​​ဂြိုဟ်ဆောင်းပါး မှာပြင်စရာရှိလို့ပြင်ချင်တာပြင်မရဘူးဖြစ်​နေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ Thaw Htet Tun (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၄၊ ၈ မတ် ၂၀၁၈ (UTC) @Thaw Htet Tun: မင်္ဂလာပါ။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဆောင်းပါးကို လက်သရမ်းမှုတွေများတဲ့အတွက် အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူ အဆင့်မှ ပြင်ဆင်ခွင့်ရအောင် ကာကွယ်ထားတာပါ။ အဲဒီအဆင့်ရဖို့ဆိုရင် အကောင့်တစ်ခုဟာ အနည်းဆုံး ၄ ရက်သက်တမ်းရှိပြီး အခြားသော ပြင်ဆင်မှု ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးမှ အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူအဆင့်ကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်ရရင် ပြင်လို့ရပါပြီ။ လောလောဆယ် တခြား ကာကွယ်မထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ လိုက်ပြင်လို့ ရပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၁၀၊ ၈ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဗျည်းဆိုတာဘာလဲ Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး) ၀၂:၀၄၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဗျည်း ဖတ်ကြည့်ပါ အစ်ကို။--ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၁၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး)  ၁၁:၁၅၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
အဝဂ် မှာ အ အက္ခရာ အပို ဖြစ်​နေတယ် ထင်ပါတယ် Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး) ၁၁:၁၈၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပြင်ပေးထားပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၂:၁၀၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ (https://my.wiktionary.org) မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၅၃၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
တိုက္ေတနီယံသတၴဳအေႀကာင္သိခ်င္လို ့ရွာမေတြ့ဘူး Kyawkyaw sein (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၇၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
တိုက်တေနီယမ် စာမျက်နှာ ရှိပါတယ်ဗျ။ ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ရှာလို့ မတွေ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၁၇၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
How do I start for creating of singer Htet Hlyam Hmue's Page? He is actually well known person. Ryzen Lynn (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၂၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Ryzen Lynn: မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဆောင်းပါးသစ်များ စတင်ရေးသားဖို့အတွက် Wikipedia:သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါး၊ Wikipedia:ထင်ရှားအရေးပါမှု နဲ့ Wikipedia:ဝီကီပီးဒီးယားက ဘာမဟုတ်ဘူးလဲ စတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် မူဝါဒတွေကို ဖတ်ရှုပြီးမှ ရေးသားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ သိလိုတာ မေးမြန်းလိုတာရှိရင် ကျွန်တော့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာမှာလဲ ဆက်လက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၂၆၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မုန်းဝန်းဗမာ လူမျိုးအကြောင်းလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လှမျိုးထွန်း (ဆွေးနွေး) ၀၄:၀၈၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ME u Helcurt3939** (ဆွေးနွေး) ၁၆:၃၀၊ ၄ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
မသိပါ Helcurt3939** (ဆွေးနွေး) ၁၆:၃၁၊ ၄ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Hello, ဥပဒေ‌ရေးရာများနှင့်ပက်သတ်၍ ဆောင်းပါးများ၊ စာအုပ်များ စသည်တို့ရှိပါသလား။ တင်ပြထားမှုတွေရှိနေပြီလား။ La Ja Hpaudut (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၃၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ပို႔စ္ေတြကို ဘယ္လိုတင္ရဲ Ashin Vimalabuddhi (ဆွေးနွေး) ၁၄:၃၀၊ ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Ashin Vimalabuddhi: သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါးရေးသားခြင်း လမ်းညွှန်စာမျက်နှာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၃၃၊ ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
သိချင်ပါတယ် ထက်ဝေယံ (ဆွေးနွေး) ၀၉:၁၉၊ ၃ မတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ယောင်ဝရွာ ကိုစာမျက်နှာဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာလမ်းညွန်ပေးဆရာ။ ကျေးဇူးပါ ။ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၇:၂၀၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Htay Lane: ယောင်ဝရွာ စာမျက်နှာကို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၄၂၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကျေးဇူးပါ ဆရာ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၅၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ကီမိုတောင်သည်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ပလက်ဝမြို့နယ်၊ဆမီးမြို့တွင်တည်ရှိ၍ချင်း​ပြည်နယ်တွင်တည်ထောင်ပြီးသား အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော သုံးခုအနက်ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ ကီမိုတောင် (ဧက ၃၂၁၇၂) ဖြစ်ပါသည်။ ကီမိုတောင်၏မူရင်းစကားသည်ခေါင်စိုအမျိုးသားတဦးနှင့်မြိုအမျိုးသားများ​တော ​လမ်းခုလက်တွင်တွေ့ဆုံစဥ်ကီမိုတောင်ကိုလက်ညှိးထိုး၍ခေါင်စို စကားဖြင့် 'ကီးမာ' ဟုပြော၍၊ကီးမာ၏အဓိပ္ပါယ်သည်မြင်လာဟုဖြစ်၍မြိုတိုင်းရင်းသားများသည်ထိုတောင်ကိုကီမာတောင်ဟုပင်ခေါ်ကြသည်။ကီမိုတောင်ကို ကျောက်ပန်းတောင်းတောင်ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ ပလက်ဝမြို့ကနေ မိုင်(၂၀)အကြာ ၊ဆမီးမြိုမှမိုင်(၅)အကြာ၊ယောင်ဝရွာမှမိုင်(၁၀)အကြာတွင်တည်ရှိပါသည်။ အမြင့်ပေ ၄၂၆၉ပေမြင့်ပါသည်။
ကီမိုတောင်ဟာ လခြမ်းပုံသဏ္ဍာန် (သို့) အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ( C )ပုံသဏ္ဍာန် ရှိသည့်တောင် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပတ်ပတ်လည်မှာတော့ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ချောက်ကမ်းပါးကြီးနဲ့ ဝန်းရံထားမှုကြောင့် တောင်ပေါ်တတ်ရန် လမ်းကြောင်း သုံးကြောင်းသာရှိပါတယ်။ တောင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ တောင်ပူစာရဲ့ အမြင့်ဟာ ပေပေါင်း ၄၂၆၉ ပေမြင့်ပြီး၊ တောင်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ တောင်ရဲ့ အမြင့်ပေကတော့ ၃၇၇၃ ပေ ရှိပါတယ်။
ကိုးကား။ ၁။ ဦးထာလုံ၊ဦးတိန်ယာတို့၏ခေါင်စိုစာတမ်း(၂၀၀၆)။ ၂။ ဦးယိုလိန်း၏ခေါင်စိုမျိုးနွယ်စုရေးရာ။ Htay Lane (ဆွေးနွေး) ၀၉:၄၉၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
ဝီကီပီးဒီးယား:လမ်းညွှန်မှ ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခု စတင်ခြင်းကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ တင်ချင်တဲ့ ဆောင်းပါးကို စာလုံးပေါင်းအမှန်နဲ့ search box (ရှာဖွေရန်) မှာ ရိုက်ကြည့်ပါ။ ထိုဆောင်းပါးမရှိသေးဘူးဆို အနီရောင်စာသားဖြစ်နေပါ့မယ်။ အဲဒီအခါ ထိုအနီစာသားကို နှိပ်၍ လိုချင်သောဆောင်းပါးကို ဖန်တီးပါ။ တည်းဖြတ်ခြင်းအကြောင်း ကိုလည်းဖတ်ကြည့်၍ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၀:၁၇၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Please see ကီမိုတောင်. Ninja✮Strikers «☎» ၁၀:၃၀၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Facebook မှာblue mark ရချင်တယ်ဆရာ[ပြင်ဆင်ရန်]
မရနိုင်ဘူးဆိုတာပဲရှိနေတယ် Mr Aung kha (ဆွေးနွေး) ၀၄:၅၉၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
@Mr Aung kha: အဲဒီကိစ္စက Facebook နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၃၀၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Burmese Ghouls သတင်းဆောင်းပါး ရေးချင်လို့ပါ ဆရာများ Wiki မှာ ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးပါဦးဗျ။[ပြင်ဆင်ရန်]
Burmese Ghouls Mobile Legends Bang Bang Team နဲ့ ပတ်သတ်ပီး wiki ပေါ်မှာ ဆောင်းပါးရေးချင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုများရေးရမလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးပါလားဗျ။ Burmese Ghouls (ဆွေးနွေး) ၀၈:၄၅၊ ၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား_ဆွေးနွေးချက်:Questions&oldid=530133" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။